अक्षर राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ? | नुवागी
सबिना बानियाँ /
रोम्बस स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्ने छात्रा सुजिता खड्काको लक्ष्य डाक्टर बन्ने हो । डाक्टर बन्न अक्षर राम्रो र स्पष्ट हुनुपर्ने विश्वासका साथ उनी आफ्नो अक्षर राम्रो पार्न चाहन्छिन् । स्कुलको हस्तलेखन प्रतियोगितामा प्रथम भएकी सुजिता भन्छिन्, ‘अक्षर राम्रो हुँदा परीक्षामा नम्बर बढी आउने र विभिन्न स्थानमा हुने हस्तलेखन प्रतियोगितामा भाग लिन पाइन्छ ।’
उनले अक्षर राम्रो बनाउन विद्यार्थीले हस्तलेखनमा चिन्तन गर्नुपर्ने, अभिभावकले घरमा हस्तलेखन अभ्यास गराउनुपर्ने, शिक्षकले विद्यार्थीलाई दैनिक हस्तलेखन गृहकार्य दिनुपर्ने र विद्यालयले निरन्तर हस्तलेखन प्रतियोगिता गराउनुपर्ने बताइन् । राम्रो अक्षरले गर्दा पढ्नलाई पे्ररित गर्ने उनको धारणा छ । उनी आफ्नो हस्तलेखन राम्रो बनाउन युट्युबबाट मोनोकर्सिब ह्याण्डराईटिङ सिक्ने गर्छिन् ।
हतारमा धेरै लेख्ने प्रयास गर्दा अक्षर बिग्रिन्छ
त्यस्तै गरी आरक्षण स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्ने छात्रा निरुता बानियाँ पनि राम्रो ह्याण्डराईटिङको माध्यमबाटै स्थापित हुन चाहन्छिन् । हस्तलेखन राम्रो भए शिक्षक, अभिभावक र साथीभाइबाट प्रशंसा पाउने उनको विश्वास छ । त्यसैले उनी नियमित रूपमा अक्षर लेख्ने अभ्यास गर्छिन् र अक्षर राम्रो बनाउने इच्छा भएकाले त्यसै गर्न सुझाव दिन्छिन् । उनका अनुसार हतारमा धेरै लेख्ने प्रयास गर्दा अक्षर बिग्रिन्छ ।
भक्तपुरको छालिङस्थित गणेश माविमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्र अभिषेक त्यात आफ्नो लेखाइ राम्रो भएपछि पढ्ने रहर बढ्ने बताउँछन् । उनको विद्यालयमा अंग्रेजी शिक्षकले कहिलेकाहीँ हस्तलेखन गर्ने गृहकार्य दिने र अरु विषय शिक्षकहरूले भने गृहकार्य नदिने गरेको उनले बताए ।
साना कक्षामा राम्रो हस्तलेखन गर्ने शिक्षक आवश्यक
आरक्षण नेशनल एकेडेमीका शिक्षक सरोज खत्री, जसरी मानिसहरू राम्रो लुगा, घरमा राम्रो रङ लगाउन आवश्यक ठान्दछन्, त्यस्तै गरि हस्तलेखनलाई पनि आकर्षक र राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘अहिलेको २१औ शताब्दीमा लेखाइका काम कम र सीधै कम्प्युटर वा मोबाइलमा टाइप गर्ने समय आएता पनि हाम्रो देशमा सानो कक्षादेखि ठुलो कक्षाहरूमा लेखेरै परीक्षा दिनुपर्ने भएकोले हस्तलेखनको महत्त्वलाई बिर्सनु हुँदैन ।’
सल्लाघारीस्थित सैनिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका एक विद्यार्थीको हस्तलेखन राम्रो भएका कारण उनको नाममा अक्षरको नामाकरण गरिएको छ । त्यसैले राम्रो लेखाइले नसोचेको उपलब्धी हासिल हुने भन्दै यसबारे सचेत हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
शिक्षक सरोज खत्रीका अनुसार राम्रो हस्तलेखन गर्न कागज र कलमको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्ने र विद्यार्थीमा पनि हस्तलेखनप्रति लगन हुनुपर्दछ । विद्याथीको हस्तलेखन राम्रो बनाउन साना कक्षामा राम्रो हस्तलेखन गर्ने शिक्षक हुनु आवश्यक रहेको तर्क उनले अघि सारे । सानो कक्षादेखि नै संरचनात्मक रूपमा हस्तलेखन नसिकाइने गरेको उनले गुनासो गरे । विद्यार्थीको अक्षर राम्रो बनाउन विद्यालय र अभिभावकबीच पनि समन्वय हुनुपर्ने उनको विश्वास छ ।
ताथलीस्थित फैढोका निमाविका शिक्षक श्रीराम कासिछ्वा लेखन शैलीमा निरन्तर अभ्यास गर्ने विद्यार्थीको हस्तलेखन राम्रो हुने कुरामा जोड दिन्छन् । उनको विद्यालयभित्रै समय–समयमा हस्तलेखन प्रतियोगिता गराएर विद्यार्थीको हस्तलेखन राम्रो बनाउने गरेको उनले बताए ।
राम्रो अक्षर हुन सहि व्याकरणको प्रयोग गरिनुपर्ने
७ कक्षासम्म सञ्चालित दुवाकोटस्थित गणेश आधारभुत विद्यालयकी शिक्षिका कल्पना बोहोराका अनुसार राम्रो हस्तलेखन भनेको हेर्दा मात्र राम्रो देखिने अक्षर भनिनु गलत हो । यसमा सहि वर्ण, हिज्जे, शुद्धता, सहि व्याकरणको प्रयोग पनि हुनु आवश्यक छ ।
उनको विद्यालयमा हस्तलेखनलाई गृहकार्यको रूपमा दिइँदैन । न नै त्यहाँ कुनै हस्तलेखन प्रतियोगिता हुन्छ । अक्षर छापा लगाएको जस्तो बनाउनु आवश्यक नरहेको उनी बताउँछिन् । अक्षर बुझिने भए हुन्छ, शुद्धाशुद्धीलाई महत्त्व दिनुपर्ने उनको धारणा हो ।
हस्तलेखनबाट व्यक्तिको व्यवहार थाहा हुने
शिक्षा अभियान्ता बास्कोटा नेपालका केही विद्यालयले ह्याण्डराइटिङ शिक्षक नै राख्ने गरेको बताउँछन् । अहिले बच्चाहरू टेलिभिजन, मोबाइलको खेलप्रति आकर्षित हुने भएकाले हस्तलेखनबाट उनीहरूको ध्यान अन्यत्र जाने गरेको उनको भनाइ छ । ‘दिमागमा आएको पहिलो कुरा हामी कापीमा लेख्ने गर्छौँ, त्यसैले पनि अहिलेको प्रिन्टिङ जमानामा हस्तलेखनको महत्व रहेको छ ।’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहार थाहा पाउन अहिले विभिन्न संस्थाले हस्तलेखनबाटै जागिरको आवेदन माग्ने गर्छन् ।’
विद्यार्थी नजानेर नभई अक्षर अस्पष्टका कारण परीक्षामा फेल
‘सुन्दर अक्षर लेख्ने बालबालिका शिष्ट, सरल, मिहिनेती, कर्तव्यपरायण र समयको पालना गर्ने हुन्छन् । सुन्दर ह्याण्डराइटिङ हुने बालबालिका मानसिक रूपमा शान्त, परोपकारी, सिर्जनशील र स्मृतिवान् हुन्छन् ।’ ह्यापी किड्स फाउन्डेशनका निर्देशक अभिषेक घिमिरेले भने ।
‘कतिपय विद्यार्थीको कलम समाउने तरिका नै गलत छ’ उनले थपे । ह्यापी किड्स फाउन्डेशनले विद्यालयका विभिन्न विद्यार्थीबिच गरेको एक अध्ययनले कक्षामा फेल हुने अधिकांश विद्यार्थी नपढेर, नजानेर मात्र नभई अक्षर फोहोर र अस्पष्ट भएर फेल भएको जनाएको छ । उनका अनुसार हस्तलेखन राम्रो हुन अक्षर सफा, स्पष्ट, सबैले बुझ्ने, सर्वमान्य, अक्षरको संरचना सहि र अक्षर एकै कोणमा ढल्किएको र समानआकारको हुनुपर्दछ ।
हस्तलेखन पेशा बन्दै
राम्रो अक्षर कसलाई मनपर्दैन र ! सबैलाई मनपर्छ । राम्रो हस्तलेखन भन्ने बित्तिकै अक्षरको आकार र बनावट मिलेको र स्पष्ट अक्षरलाई बुझिने गरिन्छ । नेपाली र अँग्रेजी हस्तलेखन विधि फरक फरक हुने गर्दछन् । हस्तलेखन एक कला हो । यसलाई अहिले विस्तारै पेशाको रूपमा विस्तार गरिँदैछ । विद्यार्थीसँग ज्ञान भएर मात्र हुँदैन, त्यो ज्ञानलाई प्रस्तृत गर्ने अक्षर पनि राम्रो हुनुपर्दछ । हस्तलेखनमा वर्ण, व्याकरणलाई पनि महत्व दिनु आवश्यक छ ।
बोल्न कठिन भएका वा जन्मजात बोल्नै नसक्ने व्यक्तिको लागि लेख्नु र त्यसमा पनि राम्रो अक्षरमा लेख्नुको महत्व सायदै कसैले अनुमान गर्न सक्लान् । उनीहरूका लागि राम्रो लेख्नु राम्रो वा मीठो बाल्नु सरह नै होला भन्ने सतही अनुमान हामी लगाउन सक्छौँ ।
पारागनको १६ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न, वर्ष विद्यार्थी र अभिभावकसँगै वर्ष शिक्षक पनि छनोट